ရာသီအစ ရလဒ်​​​တွေ ဆိုး​နေတဲ့ မန်​ချက်​စတာယူနိုက်​တက်​ အသင်းကို သတိ​ပေးလိုက်​တဲ့ မိုက်​ကယ်​အိုဝင်​ - SPORTS MYANMAR
ရာသီအစ ရလဒ်​​​တွေ ဆိုး​နေတဲ့ မန်​ချက်​စတာယူနိုက်​တက်​ အသင်းကို သတိ​ပေးလိုက်​တဲ့ မိုက်​ကယ်​အိုဝင်​
ပရီးမီးယားလိဂ် ကြယ်​ပွင့်​​ဟောင်း မိုက်​ကယ်​အိုဝင်​က ရာသီအစ တာထွက်​မ​ကောင်း ဖြစ်​​နေတဲ့ မန်​ချက်​စတာယူနိုက်​တက်​ အသင်း အ​နေနဲ့ လက်​ရှိ ပုံစံအတိုင်း ဆက်​သွား ​နေမယ်​ဆိုရင်​ ရာသီကုန်​မှာ ရာသီကုန်​ချိန်​မှာ Top6ထဲ​တောင်​ ဝင်​နိုင်​မှာ မဟုတ်​ဘူးလို့ သတိ​ပေး ​ပြောဆိုသွားခဲ့ ပါတယ်​။ မန်​ယူနိုက်​တက်​ အသင်းဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ ဒီဇင်​ဘာလက အိုလီဂန်​နာဆိုးရှား တာဝန်​ယူ ကိုင်​တွယ်​ ခဲ့ပြီး​နောက်​ ရလဒ်​​တွေ ဆက်​တိုက်​​ကောင်းမွန်​ခဲ့ကာ ချန်​ပီယံလိဂ်​ ဝင်​ခွင့်​ အတွက်​ နီးစပ်​ ခဲ့​ပေမယ့်​လည်း ရာသီကုန်​ခါနီးမှာ ရလဒ်​​တွေ ပြန်​ဆိုးသွား ခဲ့တာ​ကြောင့်​ အဆင့်​ ၆​နေရာနဲ့ ရာသီသိမ်း နိုင်​ခဲ့ပါတယ်​။
မန်​ယူနိုက်​တက်​ ဟာ ဒီရာသီ ပရီးမီးယားလိဂ် အဖွင့်​ပွဲစဉ်​မှာ ချဲလ်​ဆီးကို အိုးထရပ်​ဖို့ဒ်​မှာ ဂိုးပြတ်​ အနိုင်​ယူခဲ့တာ​ကြောင့်​ အ​ခြေအ​နေ​ကောင်းမယ်​လို့ ထင်​မှတ်​ထား ခဲ့ကြ​ပေမယ့်​လည်း ​ပြီးခဲ့တဲ့ ပွဲစဉ် ၃ပွဲမှာ​တော့ နိုင်​ပွဲ​ပျောက်​ခဲ့ပြီး ရမှတ်​ ၅မှတ်​နဲ့ အဆင့်​ ရှစ်​​နေရာမှာ ရပ်​တည်​​နေပါ​တယ်​​။ အိုဝင်​က​တော့ မန်​ယူနိုက်​တက်​ အသင်းဟာ Top 6​ ​တောင်​ မဟုတ်​ဘဲ Top4ထဲဝင်​ဖို့ အရည်​အ​သွေး ရှိတယ်​လို့ ဆိုလိုက်​ပါတယ်​။ ဒါ​ပေမယ့်​ အခြား ပရီးမီးယားလိဂ် အသင်း​တွေ ကလည်း ပရီးမီးယားလိဂ် ရဲ့ Top6ထဲကို ဝင်​​ရောက်​ နိုင်​ဖို့အတွက်​ အနီးကပ်​ ဖိအား​ပေး ​နေကြတယ်​လို့ ဝန်​ခံသွားပါတယ်​။
အိုဝင်​က “လက်​ရှိ အ​နေအထားဟာ ထူး​တော့ ထူးဆန်းတယ်​ မဟုတ်​လား။ ဘာလို့လဲဆို​တော့ ရာသီအစမှာတုန်းက လူ​တော်​​တော်​များများက ယူနိုက်​တက်​တို့ Top4ဝင်​နိုင်​မလား? ဆိုပြီး ​ပြော​နေ ခဲ့ကြတာပါ။ ဒါ​ပေမယ့်​ သူတို့ရဲ့ တာထွက်​ အ​ခြေအ​နေက သာမန်​ အ​နေအထား ​လောက်​သာ ရှိတာ​ကြောင့် လူ​တွေရဲ့ ​ပြောဆိုမှု​တွေ ​ပြောင်းလဲ သွားခဲ့ပြီး ယူနိုက်​တက်​တို့ Top6ထဲ ဝင်​နိုင်​မလား? ဆိုပြီး ဖြစ်​သွား ကြပါတယ်​။ အမှန်​ပါပဲ။ သူတို့ ဒီထဲ ဝင်​နိုင်​ပါတယ်​။ ယူနိုက်​တက်​ တို့ ​ကောင်းမွန်​တဲ့ အချိန်​​တွေ ရှိခဲ့မယ်​ဆိုရင်​ သူတို့ Top4နဲ့ ရာသီသိမ်း နိုင်​ပါ​သေးတယ်​။
ဒါ​ပေမယ့်​ အခု ပရီးမီးယားလိဂ် ပြိုင်​ပွဲမှာ အခြား အသင်း​ကောင်း​တွေလည်း အများကြီး ရှိ​နေ ကြပါတယ်​။ အသင်း ​တော်​​တော်​များများဟာ top6​နေရာကို ရယူဖို့ ကြိုးစား ​နေကြပါတယ်​။ ဒါ​ကြောင့်​ ​စောင့်​ကြည့်​ သွားရမယ့်​ အ​နေအထားမှာ ရှိ​နေပါ​သေးတယ်​။ ယူနိုက်​တက်​ရဲ့ လက်​ရှိ ​ခြေစွမ်း ၊ လက်​ရှိ ရလဒ်​​တွေ အရ က​တော့ အ​ခြေအ​နေ သိပ်​မ​ကောင်း ပါဘူး။ ဒါ​ပေမယ့်​ သူတို့ အ​နေနဲ့ ရှုံး​တွေ​တွေထက်​ နိုင်​ပွဲ​တွေ ပိုမို ရယူ ရပါမယ်​။ ဒါ့​ကြောင့်​ Top6​နေရာကို ​တွေးထားတာက ပိုပြီး​တော့​ လက်​​တွေ့ ကျပါတယ်​။” လို့ ဆိုသွားပါတယ်​။
မန်ချက်စတာယူနိုက်တက် နဲ့ လီဗာပူး တိုက်စစ်မှုးဟောင်း မိုက်ကယ်အိုဝင်က အင်္ဂလန်ရဲ့ သမိုင်းကြောင်း အကြီးမားဆုံး အသင်း နှစ်သင်းကြား ကွာဟချက်ဟာ လူတွေ ပြောနေကြသလောက် မကြီးမားဘူးလို့ ဆိုလိုက်ပါတယ်။
အိုဝင်​က “ယူနိုက်​တက်​ရဲ့ ကစားသမား အင်​အားဟာ ဒီလောက် ဆိုးတယ်လို့ ကျွန်တော် လုံးဝ မထင်ပါဘူး။ အခြား အသင်းတွေကို ခင်ဗျားတို့ ကြည့်လိ်ုက်ပါ။ ဥပမာ အားဖြင့် လီဗာပူးပေါ့။ မန်ယူနိုက်တက် ကစားသမားတွေဟာ လီဗာပူး ကစားသမားတွေထက် အတော် နိမ့်ကျ နေလို့လား? ကျွန်တော် ကတော့ ဒီလို လုံးဝ မထင်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် လီဗာပူး ကစားသမားတွေဟာ ပိုမို ကောင်းမွန်တဲ့ နားလည်မှု ၊ စည်းလုံးမှု နဲ့ ယုံကြည်မှုတွေ ရှိလား? အမှန်ပါပဲ။ ပြီးခဲ့တဲ့ နေ့က ဒီအကြောင်းကို ဂျွန်ဘန်းနဲ့ ကျွန်တော် ပြောဖြစ် ခဲ့ပါသေးတယ်။ သူကလည်း ဒီလိုမျိုးပဲ ပြောပါတယ်။ ဒီနှစ်သင်းကြား ကွာခြားမှုတွေ ရှိနေတယ်လို့ သူလည်း မထင်ပါဘူး။
ရာသီအစ ရလဒျ​​​တှေ ဆိုး​နတေဲ့ မနျ​ခကျြ​စတာယူနိုကျ​တကျ​ အသငျးကို သတိ​ပေးလိုကျ​တဲ့ မိုကျ​ကယျ​အိုဝငျ​
ပရီးမီးယားလိဂျ ကွယျ​ပှငျ့​​ဟောငျး မိုကျ​ကယျ​အိုဝငျ​က ရာသီအစ တာထှကျ​မ​ကောငျး ဖွဈ​​နတေဲ့ မနျ​ခကျြ​စတာယူနိုကျ​တကျ​ အသငျး အ​နနေဲ့ လကျ​ရှိ ပုံစံအတိုငျး ဆကျ​သှား ​နမေယျ​ဆိုရငျ​ ရာသီကုနျ​မှာ ရာသီကုနျ​ခြိနျ​မှာ Top6ထဲ​တောငျ​ ဝငျ​နိုငျ​မှာ မဟုတျ​ဘူးလို့ သတိ​ပေး ​ပွောဆိုသှားခဲ့ ပါတယျ​။ မနျ​ယူနိုကျ​တကျ​ အသငျးဟာ ပွီးခဲ့တဲ့ ဒီဇငျ​ဘာလက အိုလီဂနျ​နာဆိုးရှား တာဝနျ​ယူ ကိုငျ​တှယျ​ ခဲ့ပွီး​နောကျ​ ရလဒျ​​တှေ ဆကျ​တိုကျ​​ကောငျးမှနျ​ခဲ့ကာ ခနျြ​ပီယံလိဂျ​ ဝငျ​ခှငျ့​ အတှကျ​ နီးစပျ​ ခဲ့​ပမေယျ့​လညျး ရာသီကုနျ​ခါနီးမှာ ရလဒျ​​တှေ ပွနျ​ဆိုးသှား ခဲ့တာ​ကွောငျ့​ အဆငျ့​ ၆​နရောနဲ့ ရာသီသိမျး နိုငျ​ခဲ့ပါတယျ​။
မနျ​ယူနိုကျ​တကျ​ ဟာ ဒီရာသီ ပရီးမီးယားလိဂျ အဖှငျ့​ပှဲစဉျ​မှာ ခြဲလျ​ဆီးကို အိုးထရပျ​ဖို့ဒျ​မှာ ဂိုးပွတျ​ အနိုငျ​ယူခဲ့တာ​ကွောငျ့​ အ​ခွအေ​နေ​ကောငျးမယျ​လို့ ထငျ​မှတျ​ထား ခဲ့ကွ​ပမေယျ့​လညျး ​ပွီးခဲ့တဲ့ ပှဲစဉျ ၃ပှဲမှာ​တော့ နိုငျ​ပှဲ​ပြောကျ​ခဲ့ပွီး ရမှတျ​ ၅မှတျ​နဲ့ အဆငျ့​ ရှဈ​​နရောမှာ ရပျ​တညျ​​နပေါ​တယျ​​။ အိုဝငျ​က​တော့ မနျ​ယူနိုကျ​တကျ​ အသငျးဟာ Top 6​ ​တောငျ​ မဟုတျ​ဘဲ Top4ထဲဝငျ​ဖို့ အရညျ​အ​သှေး ရှိတယျ​လို့ ဆိုလိုကျ​ပါတယျ​။ ဒါ​ပမေယျ့​ အခွား ပရီးမီးယားလိဂျ အသငျး​တှေ ကလညျး ပရီးမီးယားလိဂျ ရဲ့ Top6ထဲကို ဝငျ​​ရောကျ​ နိုငျ​ဖို့အတှကျ​ အနီးကပျ​ ဖိအား​ပေး ​နကွေတယျ​လို့ ဝနျ​ခံသှားပါတယျ​။
အိုဝငျ​က “လကျ​ရှိ အ​နအေထားဟာ ထူး​တော့ ထူးဆနျးတယျ​ မဟုတျ​လား။ ဘာလို့လဲဆို​တော့ ရာသီအစမှာတုနျးက လူ​တျော​​တျော​မြားမြားက ယူနိုကျ​တကျ​တို့ Top4ဝငျ​နိုငျ​မလား? ဆိုပွီး ​ပွော​နေ ခဲ့ကွတာပါ။ ဒါ​ပမေယျ့​ သူတို့ရဲ့ တာထှကျ​ အ​ခွအေ​နကေ သာမနျ​ အ​နအေထား ​လောကျ​သာ ရှိတာ​ကွောငျ့ လူ​တှရေဲ့ ​ပွောဆိုမှု​တှေ ​ပွောငျးလဲ သှားခဲ့ပွီး ယူနိုကျ​တကျ​တို့ Top6ထဲ ဝငျ​နိုငျ​မလား? ဆိုပွီး ဖွဈ​သှား ကွပါတယျ​။ အမှနျ​ပါပဲ။ သူတို့ ဒီထဲ ဝငျ​နိုငျ​ပါတယျ​။ ယူနိုကျ​တကျ​ တို့ ​ကောငျးမှနျ​တဲ့ အခြိနျ​​တှေ ရှိခဲ့မယျ​ဆိုရငျ​ သူတို့ Top4နဲ့ ရာသီသိမျး နိုငျ​ပါ​သေးတယျ​။
ဒါ​ပမေယျ့​ အခု ပရီးမီးယားလိဂျ ပွိုငျ​ပှဲမှာ အခွား အသငျး​ကောငျး​တှလေညျး အမြားကွီး ရှိ​နေ ကွပါတယျ​။ အသငျး ​တျော​​တျော​မြားမြားဟာ top6​နရောကို ရယူဖို့ ကွိုးစား ​နကွေပါတယျ​။ ဒါ​ကွောငျ့​ ​စောငျ့​ကွညျ့​ သှားရမယျ့​ အ​နအေထားမှာ ရှိ​နပေါ​သေးတယျ​။ ယူနိုကျ​တကျ​ရဲ့ လကျ​ရှိ ​ခွစှေမျး ၊ လကျ​ရှိ ရလဒျ​​တှေ အရ က​တော့ အ​ခွအေ​နေ သိပျ​မ​ကောငျး ပါဘူး။ ဒါ​ပမေယျ့​ သူတို့ အ​နနေဲ့ ရှုံး​တှေ​တှထေကျ​ နိုငျ​ပှဲ​တှေ ပိုမို ရယူ ရပါမယျ​။ ဒါ့​ကွောငျ့​ Top6​နရောကို ​တှေးထားတာက ပိုပွီး​တော့​ လကျ​​တှေ့ ကပြါတယျ​။” လို့ ဆိုသှားပါတယျ​။
မနျခကျြစတာယူနျိုကျတကျ နဲ့ လီဗာပူး တိုကျစဈမှုးဟောငျး မိုကျကယျအိုဝငျက အင်ျဂလနျရဲ့ သမိုငျးကွောငျး အကွီးမားဆုံး အသငျး နှဈသငျးကွား ကှာဟခကျြဟာ လူတှေ ပွောနကွေသလောကျ မကွီးမားဘူးလို့ ဆိုလိုကျပါတယျ။
အိုဝငျ​က “ယူနိုကျ​တကျ​ရဲ့ ကစားသမား အငျ​အားဟာ ဒီလောကျ ဆိုးတယျလို့ ကြှနျတျော လုံးဝ မထငျပါဘူး။ အခွား အသငျးတှကေို ခငျဗြားတို့ ကွညျ့လျိုကျပါ။ ဥပမာ အားဖွငျ့ လီဗာပူးပေါ့။ မနျယူနိုကျတကျ ကစားသမားတှဟော လီဗာပူး ကစားသမားတှထေကျ အတျော နိမျ့ကြ နလေို့လား? ကြှနျတျော ကတော့ ဒီလို လုံးဝ မထငျပါဘူး။ ဒါပမေယျ့ လီဗာပူး ကစားသမားတှဟော ပိုမို ကောငျးမှနျတဲ့ နားလညျမှု ၊ စညျးလုံးမှု နဲ့ ယုံကွညျမှုတှေ ရှိလား? အမှနျပါပဲ။ ပွီးခဲ့တဲ့ နကေ့ ဒီအကွောငျးကို ဂြှနျဘနျးနဲ့ ကြှနျတျော ပွောဖွဈ ခဲ့ပါသေးတယျ။ သူကလညျး ဒီလိုမြိုးပဲ ပွောပါတယျ။ ဒီနှဈသငျးကွား ကှာခွားမှုတှေ ရှိနတေယျလို့ သူလညျး မထငျပါဘူး။
ကစားသမား အငျအားကို ကွညျ့လိုကျပါ။ မနျခကျြစတာယူနိုကျတကျဟာ အရမျးကို ကောငျးမှနျတဲ့ ကစားသမားတှေ ပိုငျဆိုငျ ထားပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ မနျနဂြောဟာ ပကျဂှာဒီယိုလာ ရဲ့ အသငျးတှလေိုမြိုး လကျရှိ ယာဂနျကလော့ ရဲ့ အသငျးလိုမြိုး သူ့အသငျးကို မလုပျနျိုငျသေး ပါဘူး။ အိုလီဂနျနာ ဆိုးရှား အနနေဲ့ အခြိနျအတိုငျးအတာ တဈခု အတှငျး ဒီလိုမြိုး လုပျနိုငျမလား ဆိုတာ ကတော့ စိတျဝငျစား စရာ ပါပဲ။” လို့ ဆိုသှား ပါတယျ။